Nevada Asset Dziviriro Trust Trustee, Gweta uye Mutengo
Chii chinonzi Nevada Asset Protection Trust?
Nevada asset dziviriro matrust anozvigadzirisira-wega ekushandisa mari yekutengesa. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kugadzirisa trust pamwe nekubatsirwa kubva kune iyo midziyo. Zvakare, iwe unogona kuzviita zvese uye kunakirwa nedziviriro kubva kune vanokweretesa mune ramangwana kana kumatare edzimhosva. Paunenge iwe uchinge waendesa zvinhu muNevada Kudzivirira Trust, mushure memakore maviri apfuura, iyo trust inodzivirira hupfumi hwako kubva kune vane chikwereti. Kana iwe ukashambadzira kuendesa kweaseti mutrust, mupepanhau reNevada, semuenzaniso, inoderedza iyo nguva yakatarwa kusvika kumwedzi mitanhatu. Nekudaro, mushure mekunge mutemo wekukanganisa wapera, trust inokiya yako pfuma mukati. Nekudaro, vako vaakakweretesa havagone kusvika kwavari kuti vagutse mutongo.
Kune mashoma kwazvo muganho wevatengi vatengi; sekureba iwe usina kuumba kuvimba kwekubiridzira vanozivikanwa vane chikwereti uye iwe ukasangana neyakareruka mashandiro ekushandisa, mutemo unodzivirira weNevada unogona kukupa iwe unoremekedzeka kuchengetedzwa kwemidziyo. Anenge mutirastii mumwe anofanirwa kuve mugari weNevada ane basa rekuchengetedza zvinyorwa zvetrust, achiisa mutero zvinodiwa. Mumwe munhu muNevada anoda kunyanya kupa trust. Mumwe munhu mudunhu reNevada anoda kuve wekutanga manejimendi wetrust.
Asset Dziviriro Matrust
Makambani uye maAdvs
Bank Account Kuvambwa
Bhizinesi Chikwereti Zvirongwa
Isu tinopa iyo yakanyanya Nevada
services uye mahara
Pfuma Kudzivirirwa uye Kwakanyanya Kudzora
Vagari vetrust (iwe) vane masimba makuru (simba) muchiitiko chekuvimba, kunyanya nezvekuti mutirastii anoita sei kugovera kuvimba kune vanowana. Iwe haugone kuraira zvakananga mutirastii kuti abhadhare nguva dzose kune vanovimba. Kana iwe uchikwanisa, mutongi anogona kumanikidza iwe kushandisa iro simba kunangisa mari kune vako vavengi vepamutemo. Iwe unogona, zvakadaro, unogona kukumbira kupihwa kupihwe. Uyezve iwe unogona kuve neveto simba pamusoro pekugovera kune vamwe vanovimba vanobatsirwa. Izvi zvinobvumidza trust trust kugara pachigaro chemutyairi panguva yekugoverwa kwemidziyo. Iwe une hurefu-hwemaoko kugona kukanganisa nguva uye huwandu hwekuzvipa iwe pachako.
Rumwe rugare rwepfungwa rwakavakirwa mukati memitemo iyi kugona kwevanogara trust kuti vashande se "mutarisiri wekudyara." Saka nekudaro, iwe unilaterally maneja uye investa trust zvinhu. Chimwe chimiro isimba rekubvisa uye kutsiva yako Nevada trustee. Chekupedzisira, iwe unogona kusimbisa kuti iyo trust inogovera sei zvinhu kana iyo yekugara ichipfuura nepatinodaidza kuti "simba rekugadzwa".
Iyo asset dziviriro nhandare nhandare iri nyowani nyowani muUS uye mashoma nyika dzinogadza asset dziviriro trust mutemo. Nyanzvi dzave nenguva dzichizivikanwa neNevada sebhizimusi-rine hushamwari hutongi nemitemo inofadza yemubatanidzwa uye yeV LLC. Matare akaratidzira kutsigira chifukidziro chekambani. Zvino, Nevada yabuda kumberi senzvimbo yekutonga yesarudzo yekugadzirisa asset dziviriro trust. Zvichava makore akati kuti mutemo wemhosva usati wakura. Nekudaro mitemo yeNevada yakajeka pane dziviriro yavanopa kune yakasimbiswa uye yakagadziriswa asset dziviriro trust.
Izvo zvanzi Nevada inopa yakanakisa yepamutemo sisitimu yekugadzira nekuchengetedza epamba kuchengetedzwa kwetariro kuvimba. Muna 2010 Nevada asset dziviriro yekuvimba yakagamuchira A + chiyero nemagazini yeForbes, akanakisa murudzi uye nyika yega yekumakisheni A + kunze kwe13.
Hapana nyika mari yemitero
Hapana mamiriro emakambani emitero
Chipfupi chirevo chekukanganisa pakutamisa zvinhu (makore maviri), ayo anogona kunge akapfupika semwedzi mitanhatu kana zvikaitwa nemazvo
Vese vane chikwereti vanorambidzwa kuwana trust trust zvinhu, kusanganisira alimony, rutsigiro rwevana, kutonga, nezvimwe.
Yepamusoro soro humbowo; chero mukweretesi ari kupokana nekuendeswa kwemidziyo anofanira kupa humbowo hwakajeka uye hunogutsa hwechinangwa chekubiridzira
Dziviriro Yezve Asset Dzimba
Ndokumbirawo kuti murambe muchifunga, iyo Nevada asset dziviriro yekuvimba inonyanya kune veNevada vagari vane Nevada yakavakirwa midziyo. Nyaya yematare haina kutaridzika zvakanaka kwazvo kana mushandi anogara mune imwe nyika. Isu takaona vatongi vachiti, “Handina basa kana Nevada iine zvirevo izvi. Hatina ivo muno muCalifornia, New York, nezvimwe. Saka ini ndinoraira trustee kuti atore zvinhu.
Saka, ndeipi mhinduro kune vasiri-Nevada vagari? Huye, sangano redu zvakare rine nyika chete "Trigger Trust." Ndiko kuvimba kuri mudzimba, US-yakavakirwa asset chengetedzo trust kusvika zviri pamutemo kumanikidzwa. Ipapo matirastii anosarudza kukonzeresa chikamu chekutiza uye kushandura iyo trust kuita yakasimba yepasi rese yekuchengetedza nhumbi chishandiso… .a Cook Islands trust. Yedu marezinesi, akasungwa, Cook Islands gweta remutemo pane matanho ari mutrustee. Mutariri weNevada angangoda kuteedzera kumatare edzimhosva eUS. Nemutirastiri wekunze, kune rimwe divi, ivo havafanirwe kuteedzera mirairo yedare rekunze, uye vanogona kuramba kutambidza zvinhu zvekuvimba nemuvengi wako zviri pamutemo.
Magweta nemakambani ekuvimba anovimbisa Nevada trasti. Iwe unogona kufonera imwe yenhamba dziri pamusoro uye wobvunza mibvunzo kubva kune edu nyanzvi vanachipangamazano vanozokubatsira kukutungamira uye kupindura mibvunzo yako. Neimwe nzira, iwe unogona kuzadza imwe yemahara ekutaurirana mafomu. Mumwe wemagweta edu anogona kunyora trust iyo taylormade yezvaunoda.
Dhizesa Yako Asset Dziviriro Chirongwa
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchichengetedzwa netiap, chivimbo cheNevada, kana zvirinani zvakadaro, chinokonzeresa kuvimba, chinopa kusiana kuchirongwa chako. Mafemu epamusoro ekudzivirira kwemidziyo munyika anokurudzira kuparadzira hupfumi hwako kutenderedza mumatunhu mazhinji ekudzivirira nhumbi uye mumatunhu mazhinji ekudzivirira nhumbi. Izvi zvinoita kuti mupikisi wako wepamutemo arwe nehondo pamatanho mazhinji, achiwedzera mari hombe pamitengo yepamutemo yekutsvaga hupfumi hwako. Nevada trust kana trigger trust inogona kurumbidza chero chirongwa chekuchengetedza asset, kumahombekombe kana epamba.
Taura kune Nevada bhizinesi rebasa nyanzvi nhasi, kubvunza kwemahara panguva yakajairika maawa ebhizinesi, kufona 1-888-444-4412
Yakapedzisira Yadzikwa panaJune 3, 2019